Global Voices teny Malagasy » Mampiseho ny fitsapan-kevitra fa tsy matoky ny polisy ao an-tanàna intsony ny ankamaroan’ny vahoakan’i Hong Kong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Novambra 2019 7:22 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Famazivaziana ny “polisy ratsy taiza” ny graffiti ao ambadik'ilay polisy misahana ny rotaka. Sary avy amin'ny Stand News.
Nesorin'ny governemantan'i Hong Kong tamin'ny fomba ofisialy ny volavolan-dalàna mifehy ny fampodiana-fandroahana an-tanindrazana (any Shina) tamin'ny 23 Oktobra, saingy mitohy ny fihetsiketsehana ary adino ny volavolan-dalàna mifehy ny fampodiana satria ny olana momba ny herisetran'ny polisy sy ny fampiasana herisetra no lasa ahiahy lehibe indrindra ao an-tanàna.
Very fanohanana marobe avy amin'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana, izay nomena satro-boninahitra tsara indrindra ao Azia nanomboka tamin'ny taona 1980 hatramin'ny nipoahan'ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana tamin'ny volana Jiona. Amin'izao fotoana izao dia maherin'ny antsasaky ny mponina ao an-tanàna no tsy matoky velively ny polisy araka ny fitsapan-kevitra  notontosain'ny Foibe ho an'ny Fifandraisana sy ny Fanadihadiana ny Hevi-bahoaka ao amin'ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong (CUHK).
Nanjary fitakiana dimy ny fitakiana iray tany am-boalohany noho ny herisetran'ny polisy
Araka ny nasongadin'i Martin Purbrick, mpitandro filaminana teo aloha tao amin'ny sampam-pitsikilovana miady amin'ny asa fampihorohoroana ao Hong Kong, tamin'ny taratasy fikarohana navoaka  tamin'ny tapaky ny volana Oktobra, ny korontana ara-politika ao Hong Kong dia noho ny “fampiasana herisetra fahatany” nataon'ny polisy tamin'ny “fihetsiketsehana manontolo feno vahoaka an'arivony maro “fa tsy tamin'ireo olona vitsy an-jatony izay nahatonga ny herisetra. Nitranga tamin'ny 12 jona ny raharaha raha nitifitra baomba mandatsa-dranomaso maherin'ny 150 tamin'ireo vahoaka teo am-panaovana fihetsiketsehana ny polisy ary niantso ny fihetsiketsehana ho “fikomiana” , heloka izay mitondra fanamelohana farany henjana, sazy folo taona an-tranomaizina.
Nanomboka tamin'io andro io, nivoatra ho fitakiana dimy ny fitakiana tokana, fanesorana ny volavolan-dalàna fampodiana amin'ny fihetsiketsehana, ireto avy ireo fitakiana dimy: fanadihadiana mahaleotena momba ny fampiasana herisetra ataon'ny polisy ao Hong Kong, fanesorana ny marika rotaka, famotsoran-keloka ho an'ireo nosamborina, ary fifidianana andraisan'ny rehetra anjara ao amin'ny Filankevitra mpanao lalàna sy ireo lehiben'ny mpanatanteraka.
Araka ny asehon'ny fitsapan-kevitra mbola eo ampananatontosana azy ny CUHK nanomboka tamin'ny volana Mey, dia 6,5 ​​isan-jato fotsiny ny tahan'ny tsy fahatokisana velively ny polisy talohan'ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana ary latsaky ny 30 isan-jato no naneho tsy fahatokisana ny mpitandro ny filaminana ao an-tanàna. Taorian'ny 12 jona, nitombo 22,5 isan-jato ny tahan'ny tsy fahatokisana velively ny polisy saingy mbola natoky ny polisy ny ankamaroan'ireo namaly. Nanatontosa fihodinana fahadimy tamin'ny fanadihadiana an-tariby tamin'ny alàlan'ny olona nosafidiana fahatany  ny foibem-pikarohana hatramin'izao ary nasaina nanome isa amin'ny fahatokisana ny polisy izy ireo, isa manomboka amin'ny aotra (marefo) hatramin'ny folo (matanjaka). Mamintina ny fanadihadiana fihodinana fahadimy ny ekipan'ny fikarohana, Leung Kai Chi:
Fitsapan-kevitra farany: 51,5% milaza fa tsy matoky velively ny Polisy HK. Sambany maherin'ny antsasany
. Maherin'ny 70% no milaza fa tsy matoky ny polisy izy ireo. Miaina zava-misy ara-tsosialy goavana momba ny herisetra tsy misy ara-dalàna ao amin'ny tanàna manontolo isika ankehitriny
Taorian'ny fanafihan'ny andian'olona tao Yuen Long  tamin'ny 21 Jolay no nihena be ny fanohanan'ny vahoaka ny polisy. Ny vokatra avy amin'ny CUHK dia mifanaraka amin'ny fitsapan-kevitra iray hafa nataon'ny Hong Kong Public Opinion Institute  tamin'ny 24-26 Jolay 2019, izay nanohana ny fametrahana vaomiera mahaleo tena misahana ny fanadihadiana ny 79 isan-jaton'ny mpamaly ary 73 isan-jato manohana ny fanesorana tanteraka ny volavolan-dalàna.
Raha mampiseho ny valin'ny fanadihadiana fa hita ho hadisoana tamin'ny fitsarana ny “fampiasana herisetra fahatany” tamin'ny 12 jona, dia nanimba ny fahatokisan'ny vahoaka ny polisy ny tsy fisian'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fanafihana nataon'ny mpomba an'i Beijing tany Yuen Long sy ny fandavan'ny governemanta hanao fanadihadiana momba ny fitondran-tena tsy nety nataon'ny polisy.
Ny tsy fisian'ny rariny sy ny korontana tsy fanarahan-dalàna
Niverimberina ny fanafihana mpanao fihetsiketsehana nataon'ireo mpanohana an'i Beijing, ka anisan'izany ny fanafihan'ny andian-olona tao Tsuen Wan sy North Point, izay tsy nandraisan'ny polisy misahana ny rotaka fepetra hanakanana ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba an'i Beijing. Tetsy ankilany, niteraka ratra maro io fanafihana io. Ity manaraka ity ny lisitry ny zava-nitranga:
Ny 5 aogositra, mpanao fihetsiketsehana 18 taona no nodarohan'ireo jiolahimboto roa manao akanjo fotsy teo amin'ny lohany, ny sandriny ary ny tongony.
Ny 20 aogositra, olona telo no notafihan'ny  lehilahy iray tamin'ny antsy teo akaikin'ny Lennon Wall ao Tseung Kwan O. Vehivavy mpanao gazety iray no nisy nanindrona antsy teo amin'ny tratrany.
Tamin'ny 16 Oktobra, Jimmy Sham, mpitarika ny vondrona demaokrasia ao Hong Kong, Civil Human Rights Front no notafihan'ny  lehilahy misaron-tava misy 4-5 tamin'ny tehimby teny amin'ny làlana Mong Kok.
Tamin'ny 19 Oktobra, olona 19 taona no notsatohan'ny  mpizahatany shinoa tanibe iray antsy teo amin'ny tendany sy ny kibony tao amin'ny Lennon Wall ao amin'ny distrikan'i Taipo.
Tamin'ny 3 Novambra, mpanolotsaina distrika iray mpomba ny demaokrasia no voakaikitra sofina nataon'ny lehilahy iray izay nanafika olon-droa tamin'ny antsy. Dimy no naratra ary tena naratra mafy ny iray notsatohan'ilay mpanafika tamin'ny antsy.
Satria tsy matoky ny polisy intsony ireo mpanao fihetsiketsehana, dia nandray fepetra fiarovan-tena ireo hiringiriny mba hamaly, ary misy ireo fepetra noraisina tamin'ny endrika fitsaram-bahoaka. Ohatra, ny 8 Oktobra, raha nisy mpamily fiarakaretsaka iray namantana ny fiarany nankany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana  ary nandratra mpanao fihetsiketsehana vehivavy iray farafahakeliny tany Cheung Sha Wan, dia voadaroka mafy teny an-toerana ilay mpamily ary nampidirina hopitaly. Taorian'ny zava-nitranga, dia nanome dimy hetsy dolara Hong Kong (eo amin'ny 68.000 dolara Amerikana) ho an'ilay mpamily fiarakaretsaka ny fikambanana iray mpomba an'i Beijing sy mpanohana ny polisy raha nosamborina kosa noho ny fanakorontanana ny mpanao fihetsiketsehana iray manohitra ny governermanta, 20 taona izay hita nandritra ilay lozam-pifamoivoizana
Maherin'ny antsasak'ireo namaly ny fanadihadiana nataon'ny CUHK no nanaiky ny fihetsika fitsaram-bahoaka (ivelan'ny lalàna) ataon'ny hiringiriny:
Manaiky ny fitsaram-bahoaka ve ny olona? Toa eny. Tsy matoky ny polisy intsony ankehitriny ny olona, ka tsy maninona raha izy ireo no mamaha ny zava-misy. Saingy mba hamehezana ny vahoaka, na izany aza.
Mandritra izany fotoana izany, lasa miha-mahery setra tamin'ny famoretana ny fihetsiketsehana nanomboka ny volana aogositra ny polisy misahana ny rotaka. Nitranga ny iray tamin'ireo seho mahery setra indrindra raha nanafika  tao amin'ny tobin'ny metro Prince Edward niaraka tamin'ny kibay sy tifitra ranon-tsakay ny polisy misahana ny rotaka, ary nisambotra fahatany ireo mpandeha tao anatin'ny gara ny 31 aogositra taorian'ny “famoriam-bahoaka iray nahazo alalana” izay nitranga tao amin'ny nosin'i Hong Kong.
Ny fahatakaran'ny vahoaka ny herisetran'ny mpanao fihetsiketsehana
Ho setrin'ny herisetra ataon'ny polisy, dia nipoitra ny herisetra miverimberina tamin'ny volana septambra. Nitoraka baomba afo ireo mpanao fihetsiketsehana raha nitifitra baomba mandatsa-dranomaso sy mitifitra bala fingotra ny polisy. Na izany aza, tsy niova ny hevitry ny olona. Raha ny marina aza dia betsaka ireo mpamaly nohadihadiana nahita fa “azo takarina” ny herisetra mitombo ataon'ny mpanao fihetsiketsehana:
Iray volana taorian'ny fandrobàna sy ny baomba afo, mahagaga fa tsy niova loatra ny isan'ny herisetran'ny fihetsiketsehana. Mety ho antony: tezitra loatra ny vahoaka noho ny herisetran'ny polisy ka ekena ny fitomboan'ny herisetran'ny fihetsiketsehana
Amin'ny lafiny iray, misalasala kokoa ny olona amin'ny asan'ny mpitandro ny filaminana raha jerena ny fitifirana tanora mpanao fihetsiketsehana iray tamin'ny bala tena izy  tany Tsuen Wan tamin'ny 1 Oktobra:
Ahoana ny amin'ny seho mivantana tao Tsuen Wan? Valin-teny manjaka: nanao fahadisoana ny polisy.
Tamin'ny tapaky ny volana Oktobra, dia 51,5 isanjaton'ny nohadihadian'ny CUHK no naneho tsy fahatokisana velively ny polisy. Nahazo fanohanana lehibe avy amin'ny vahoaka ny tolo-kevitra amin'ny fanarenana lehibe ny mpitandro ny filaminana, izay natolotr'ireo mpikatroka taorian'ny zava-nitranga tao amin'ny toby Prince Edward tamin'ny 31 Aogositra araka ny fanadihadiana tamin'izany ihany. Nampiseho ny fitsapan-kevitra nataon'ny CUHK tamin'ny volana oktobra fa efa ho 70 isan-jaton'ny nohadihadiana no nanohana ny fanavaozana fototra ny polisy ao an-tanàna:
Ity no fotoana voalohany nametrahanay fanontaniana momba ny “fanarenana lehibe” eo amin'ny mpitandro ny filaminana, indraindray antsoina hoe “fangatahana fahenina”. Toa Eny ny valiny.
Tsy nandray fepetra mihitsy ny governemanta Hong Kong mba hamahana ny krizin'ny tsy fitokisana polisy. Mifanohitra amin'izany, namoaka fitsipika maika sy nampihatra ny lalàna Anti-Mask  (miady amin'ny saron-tava),  izay samy manome fahefana tsy voafetra ho an'ny polisy mba hanakombonam-bava ny fihetsiketsehana ny Lehiben'ny Mpanatanteraka, Carrie Lam.
Niteraka faharatrana olom-pirenena miisa 1.235 ny fihetsiketsehana naharitra efa-bolana. Ankoatra izay, mpanao hetsi-panoherana 300-400 no nahazo fitsaboana tany amin'ny toeram-pitsaboana ambanin'ny tany noho ny tahotra ny ho voasambotra any amin'ny hopitaly. Nandefa baomba mandatsa-dranomaso efa ho 6000 ny polisy ary nisambotra mpanao fihetsiketsehana maherin'ny 3.000.  Mpianatra ny iray ampahatelon'ireo nosamborina ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/12/144618/
 tsara indrindra ao Azia : https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/short-reads/article/3020230/how-hong-kong-police-once-considered-asias
 tsy matoky velively ny polisy araka ny fitsapan-kevitra: https://twitter.com/LeungKaiChiHK/status/1184369208483672065
 niantso ny fihetsiketsehana ho “fikomiana”: https://globalvoices.org/2019/06/21/hong-kong-police-remove-riot-label-from-june-12-protests-but-citizens-still-demand-justice/
 Nanatontosa fihodinana fahadimy tamin'ny fanadihadiana an-tariby tamin'ny alàlan'ny olona nosafidiana fahatany: http://video3.mingpao.com/inews/201910/20191015_mpsurvey.pdf
 fanafihan'ny andian'olona tao Yuen Long: https://globalvoices.org/2019/07/22/armed-mobs-attack-anti-extradition-protesters-in-a-suburban-hong-kong-subway-station/
 Hong Kong Public Opinion Institute: https://static1.squarespace.com/static/5cfd1ba6a7117c000170d7aa/t/5d43f2fa3b50bf0001af5d0c/1564734205477/pcf_anti_extradition_ppt_v2_pori.pdf
 mpanao fihetsiketsehana 18 taona : https://globalvoices.org/2019/08/09/beijings-loyalists-from-fujian-province-vow-to-beat-up-anti-extradition-protesters-in-hong-kong/
 olona telo no notafihan'ny: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3023538/unidentified-man-stabs-three-people-tseung-kwan-o-tunnel
 olona 19 taona no notsatohan'ny: https://www.hongkongfp.com/2019/10/19/19-year-old-stabbed-neck-stomach-tai-po-lennon-wall-assailant-declares-hong-kong-part-china/
 mpanolotsaina distrika iray mpomba ny demaokrasia no voakaikitra sofina : https://www.hongkongfp.com/2019/11/03/man-bites-off-ear-pro-democracy-district-councillor-brawl-outside-hong-kong-mall/
 raha nisy mpamily fiarakaretsaka iray namantana ny fiarany nankany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana: https://www.hongkongfp.com/2019/10/08/20-year-old-arrested-rioting-vigilante-beating-taxi-driver-accused-ploughing-protesters/
 dia nanome dimy hetsy dolara Hong Kong : https://hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20191009/60133218
 fitifirana tanora mpanao fihetsiketsehana iray tamin'ny bala tena izy: https://globalvoices.org/2019/10/02/as-real-bullets-fly-and-hit-in-hong-kong-the-police-start-a-new-circle-of-unprecedented-violence/
 namoaka fitsipika maika sy nampihatra ny lalàna : https://globalvoices.org/2019/10/04/ngos-slam-hong-kongs-enacting-of-emergency-law-banning-masks-at-protests-as-draconian/
 faharatrana olom-pirenena miisa 1.235 : https://www.dw.com/zh/%E5%B0%B1%E5%8C%BB%E5%8F%8D%E9%81%AD%E9%80%AE%E6%8D%95-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%A4%BA%E5%A8%81%E8%80%85%E6%8A%95%E5%A5%94%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E8%AF%8A%E6%89%80/a-50744908
 baomba mandatsa-dranomaso efa ho 6000 ny polisy ary nisambotra mpanao fihetsiketsehana maherin'ny 3.000.: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/up-to-88-of-hong-kong-population-exposed-to-tear-gas-since-june